Naqshad Cilmi-baaris ah sida looga bogsado boggaaga ka dib weerarka xun
Waayo-aragnimada ugu liicinta ee mulkiilaha goobta waa weerarrada xun ee shabakadooda.Xaaladdan, horumariyeyaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay is dejiyaan ayna si haboon u fuliyaan tallaabooyin sax ah. Frank Abagnale, Sare Maareeyaha Guusha Macaamilka Sare, wuxuu bixiyaa talaabooyin si nidaamsan dib loogu soo celiyo goobta la jabsaday. Aan tagno!
Ugu horreyn, fiiri kombiyuutarka fiilooyinka kasta - watches best replica. Tani waa talaabo diyaar u ah oo caawisain laga reebo suurtogalnimada in aad kombuyuutarkaada u noqoto meesha laga soo galo kahor inta aan la bilaabin si uu u bogsado. Qoraalkan, sidaas, scankombiyutarkaaga maxaliga ah ee infekshinka, nacfiyada ama fayraska waa inay noqdaan tallaabada ugu horreysa. Tusaale ahaan tarjumaha fayraska lagu taliyey waa EU-Cleanerlaga bilaabo xarunta la-talinta ee Anti-Botnet, Jarmalka. Qorshuhu wuxuu gacan ka geystaa horumarinta goobta si looga tirtiro wax kasta oo khayaano bilaash ah. Intaa waxaa dheer, tanXarunta Talo-siinta Degdegga ah waxay soo dirtaa lambarka tikidhka iyo macluumaadka xiriirka adoo email u diraya mulkiilaha bogga haddii ay dhacdo goobta la jabsaday.
Marka labaad, waa in la rogaa furaha xisaabaadka maamulka. Waa tallaabo ah in ay hubiso khaniisiintadib dambe uma geli karo xogtaada, website-ka ama shabakada internetka. Caymisyada waxaa laga maamuli karaa goobaha macaamiisha ee adeegga martida iyo qaybta maamulkaee goobta. Waxaa intaa sii dheer, ilaalinta sirta ah waxaa kor loo qaadi karaa iyadoo la adeegsan karo meelo webka iyada oo la adeegsanayo hababka amniga sida "Transfer File Transfer"Protocol (SFTP), bedelida furaha sirta ee adeegyo kale iyo xulashada ereyada ugu caansan. Kalmadaha caadiga ah marna lama isticmaali karo sidaereyada sirta ah ee loogu talagalay ammaanka internetka.
Seddaxleey, adeegso phpMyAdmin si dib loogu bilaabo cinwaanka admin ee cinwaanka..Haddii milkiiluhu uusan awoodinsi ay u saxiixaan qaybta maamul ee goobta, hackers ayaa laga yaabaa inay bedelay sirta ama la tirtiray xisaabta. Muuqaalkan,furaha ereyada waa in la beddelo. Tan waxaa lagu gaari karaa isticmaalka phpMyAdmin ee loogu talagalay soo-saarayaasha isticmaalaya WordPress.
Dhaawac waa in la qiimeeyaa tallaabada xigta ee dib u soo celinta goobta la jabsaday. Waxay u baahan tahayqiimaynta xaaladda iyo qorsheynta sida loo sii wado. Go'aami feylka cudurka qaba, wax kasta oo ku saabsan xogta xasaasiga ah, iyo helitaankadiiwaanka iyo haddii goobaha kale ee ku jira server-kaagaaga ay saameyn ku yeeshaan. Nidaamka waa la fulin karaa iyadoo la adeegsanayo aaladaha Google Websaytiyaha.
Marka dambe, dib u soo celi xogtaada iyo hubi khayaanada. Talaabadan, milkiilaha goobta waa inuubeddel wixii faylal ah ee la saameeyey iyada oo aan diiwaangalin faylasha aan loo baahnayn. Intaa waxaa dheer, xogta xogta waa in dib loo soo celiyo haddii ay suurtogal tahayin hackers-ka la helayo xogta macluumaadka aan laga saari karin. Xasuuso, laba koobi oo muhiim ah waa Joomla iyo WordPress.
Dib u cusbooneysii mawduucyada, fiilooyinka, kordhinta iyo codsiyada. Khasaaraha ayaa inta badan isticmaala amnigagodadka dheeraadka ah, fiilooyinka, iyo mawduucyada. Sidaas darteed, sida ugu dhakhsaha badan dib u soo celinta dib u soo celinta, dhammaan xarumaha amniga ee la ogsoon yahay waa in la xiro iyadoo la cusbooneysiinayodhammaan mawduucyada, kordhinta, iyo codsiyada. Mid kasta oo ka mid ah fiilooyinka ayaa saameeya amaanka goobta.
Ugu dambeyntii, ka shaqee inaad ka saarto bogga laga soo saaro madadaalada. Yahoo, Google, iyo Bing waxay ku hayaanmadow ee goobaha ay ku dhacaan fayrasyada. Goob kasta oo lagu meeleeyay liiska Google, tusaale ahaan, waxaa la ciqaabi doonaa darajo hoose ama xitaa laga saaraylaga soo bilaabo muujinta raadinta. Sidaa darteed, ka dib markaad soo dhoofiso nadiif nadiif ah oo bedelaya furaha sirta ah, ogeysii makiinadaha raadinta si looga saaro liisaska madow.
Gebagabadii, weerarrada goobaha waxay ka mid yihiin dunida internetka casriga ah. Haddii goobwaa la jabsaday, kuwa laga yaabo inay dareemaan naxdin. Waqtigaan, waa muhiim inaad isdifaacdo madaama aad hadda ogtahay waxa la samaynayo iyo si wax ku ool ahwebsite.